No good thing ever dies | Zizawa's refuge
Burma, History, Rangoon
Posted by zizawa ⋅ 16/04/2009 ⋅4Comments
ကျွန်မလေ ကျွန်မအကြောင်း ပြောမယ် ပြောမယ်နဲ့ မပြောဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အခုလို နှစ်သစ်ကြီးမှာ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ပြောရမှာ တမျိုးကြီးပဲ။
လူတွေကတော့ ကျွန်မကို မေ့သွားလောက်ပါပြီ။ ကျွန်မရင်ခွင်အောက်မှာ ရာစုနှစ် တခုနီးပါး လက်ပွန်းတတီးနေခဲ့ကြပြီး ၂၀၀၂ခုနှစ်မှာ အားလုံးဗြုန်းစားကြီး ထွက်သွားလိုက်ကြတာ။ ကျွန်မကိုတောင် နှုတ်ဆက်မသွားကြဘူး။ အင်းလေ။ သူတို့မှာလဲ ကိုယ့်အပူနဲ့ ကိုယ်ဆိုတော့ နှုတ်မဆက်နိုင်ဘူး ထင်ပါရဲ့ လေ။
ကျွန်မနာမည်လား။ ကျွန်မမှာ နာမည်မရှိဘူးရှင့်။ ဘာအိမ်ရာ ညာကွန်ဒိုဆိုတာ ၁၉၉၀ ဒီဘက်တွေမှာမှ ပေါ်လာတဲ့ ချာတိတ်တွေပါ။ ကျွန်မတို့ကိုတော့ လွစ္စလမ်းက တိုက်ဝါကြီး ဆိုပြီးတော့ပဲ သိကြတယ်။
ကျွန်မတို့မှာ ၂၄၄ကနေ ၂၆၄ဆိုပြီး တအုပ်စု၊ ၂၆၄နဲ့ဟိုဘက်က တအုပ်စုဆိုပြီး အုပ်စု၂စု ကွဲနေတယ်။ ကွဲနေတာကလဲ ကြားမှာ၅ပေလောက် လမ်းကြားလေး ခြားသွားလို့သာ ကွဲသွားတာပါ။ ရန်တွေဘာတွေဖြစ်ကြတာ မဟုတ်ဘူး။
ကျွန်မတို့ကို ၂၀ရာစုအစောပိုင်းလောက်မှာ ဆောက်တယ်လို့ထင်တာပဲ။ သေချာအောင်တော့ တရက်လောက် မြို့တော်ခန်းမက မြူနီစီပယ် မှတ်တမ်းဟောင်းတွေမှာ သွားရှာရမယ်။
တိုက်ပြီးခါစတုန်းကဆို ကျွန်မတို့လေ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တကြည့်ကြည့်နဲ့။ ဒီလောက် ကျယ်ပြီး မြေပေါတဲ့ ၂၀ရာစုခေတ်ဦးက ရန်ကုန်မှာ သုံးထပ်တိုက်ဆိုတာ နေရာတကာ ရှိတာမှ မဟုတ်တာ။ တထပ်တထပ်ကို ပေ၂၀လောက်မြင့်တာ။ အထဲမှာ ထပ်ခိုးပြည့်ခင်းအုံးမလား။ ၁၀ပေမြင့်တဲ့ ထပ်ခိုးလောက်တော့ ကောင်းကောင်းခင်းနိုင်တယ်။
မကြာခင်ကမှ ပေါ်လာတဲ့ ဟောင်ကောင်တိုက်တွေဆိုလား။ ကျွန်မတွေ့ဖူးပါရဲ့။ အထဲဝင်ကြည့်ဖို့ မပြောနဲ့။ အပြင်က ကြည့်ရုံနဲ့ အသက်ရှုကျပ်တယ်။ ကျွန်မတို့လို တောင့်တောင့်တင်းတင်း၊ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းမဟုတ်ရှာဘူး။
ကျွန်မတို့ကိုယ်ထဲမှာ သံတိုင်ကြီးတွေမြှပ်ထားတာလဲ မနည်းဘူး။ ၂၄၆မှာနေတဲ့ အင်ဂျင်နီယာ ဆိုရင်လေ မပြောင်းခင် ကျွန်မကိုကြည့်ကြည့်ပြီး ၀မ်းနည်းပက်လက် ဖြစ်နေတာ ကျွန်မလေ နှစ်သိမ့်လို့ရရင် နှစ်သိမ့်ချင်ပါရဲ့။ အေးလေ။ အဆောက်အဦတွေကို ကိုယ်တိုင်ဆောက်နေရတဲ့ လူဆိုတော့ သက်တမ်းမစေ့သေးတဲ့ ကျွန်မတို့ကို ဖျက်ဖို့ထားခဲ့ရမှာ ၀မ်းနည်းရှာမှာပေါ့။
တကယ်ဆို ကျွန်မတို့ဟာ နေမယ်ဆိုနေလို့ ရပါသေးတယ်။ သက်တမ်း၁၀၀ဆိုတာ တိုက်သက်တမ်းနဲ့ပြောရင် တိုတိုလေးပါ။ လန်ဒန်တို့ ရောမတို့မှာဆို နှစ်၄၀၀၊ ၅၀၀ သက်တမ်းရှိတဲ့ အဆောက်အအုံတွေဟာ နည်းမှမနည်းတာ။
ကျွန်မတို့လား။ နေခွင့်ရမယ်ဆို နေချင်တာပေါ့ရှင်။ ကိုယ်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာ မခွဲမခွာ နေခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ ဘယ်ခွဲချင်ပါ့မလဲ။
လူတယောက်ရဲ့ သက်တမ်းဟာတိုတိုလေးပါ။ လူတယောက်ဟာ သူဘာလဲ ဆိုတာကို သူနဲ့ သူ့မိသားစုကမြင်တဲ့သူ။ ဥပမာ–ကျွန်တော်ဟာ မောင်နီ–ဦးစနဲ့ ဒေါ်လှသားမောင်နီ။ မိဖြူရဲအကို၊ ဦးတိုးရဲ့မြေးမောင်နီ ဆိုတဲ့ပုံရိပ်အပြင် လွစ္စလမ်းမှာနေတဲ့ မောင်နီ၊ ရန်ကုန်မြို့ ကြီးမှာ ကြီးတဲ့ မောင်နီ၊ ဗမာပြည်က မောင်နီ၊ လောလောဆယ် နယူးယောက်မှာ ကျောင်းတက်နေတဲ့မောင်နီ၊ သစ်တောတွေကို ချစ်တဲ့မောင်နီ၊ လယ်စိုက်ချင်တဲ့မောင်နီ စသဖြင့် ကိုယ့်ဘ၀တိုတို ကျဉ်းကျဉ်းလေးကိုကျော်ပြီး ကိုယ့်ပုံရိပ်ကိုကိုယ်ဖော်နိုင်တော့မှ၊ ကိုယ်ဘာလဲဆိုတာကို အဲဒီအရာတွေနဲ့ယှဉ်ပြီး အဖြေထုတ်ကြည့်တော့မှ အဲဒီ အရာတွေရဲ့သမိုင်းနဲ့ ကိုယ့်သမိုင်း ဆက်စပ်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် တန်ဖိုးထားသလို အဲဒီဟာတွေကိုလဲ တန်ဖိုးထားတတ်မှာလေ။
ကျွန်မပြောချင်ဇောကြီးနေလို့ ရှုပ်သွားပြီလား။ ကျွန်မပြောချင်တာကလေ ကျွန်မတို့ကို ဖျက်စေဆိုပြီး အမိန့်လာပေးတဲ့ စည်ပင်ကလူတွေက ကျွန်မတို့ကို တိုက်အိုကြီးတွေလို့ပဲ မြင်တာကို ကျွန်မပြောချင်တာပါ။ ကျွန်မတို့ဟာ တိုက်အိုတွေ သက်သက်မဟုတ်ဘူး။
ကျွန်မကတော့လေ ကျွန်မကိုယ်ကို ရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ လူမှုသမိုင်းကို တစိတ်တပိုင်း ၀င်ရေးပေးခဲ့သူ။ ရန်ကုန်မြို့ကြီးနဲ့ မြို့တော်သူမြို့တော်သားတွေရဲ့ ပြောင်းလာတဲ့ အဖြစ်တွေကို သက်သေထွက် နိုင်တဲ့လူ။ ကုလားဗမာအဓိကရုဏ်း၊ တရုတ်ဗမာ အဓိကရုဏ်း၊ ကိုအောင်ဆန်းတို့ရဲ့ ကျောင်းသား သပိတ်၊ ရှစ်လေးလုံး လှုပ်ရှားမှု အားလုံးအားလုံးကို မြင်ခဲ့သူပေါ့။ ကုလားတွေနဲ့ ဗမာတွေ ရိုက်တုန်းကဆိုရင်လေ ဟိုဘက်လမ်း ၃၈လမ်းတင် ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။
ကျွန်မတို့ လမ်းထဲက မဂိုကုလားတွေကိုတော့ လမ်းထဲက ဗမာတွေကပဲ ဖွက်ပေး ထားကြတယ်လေ။ လမ်းကလူညီကြပါတယ်။ ၈၈ဖြစ်တော့ ကျောင်းသားလေးတွေ ကျွန်မတို့တိုက်ရှေ့ က ဖြတ်ဖြတ်သွားတုန်း ကျွန်မတို့က တတိယ ကျောင်းသားသပိတ် ပြန်ရောက်သွားသလို၊ နှစ်၅၀ပြန်ငယ်သွားသလို ခံစားရတယ်။
ကျွန်မက အဲဒီလို သမိုင်းဖြစ်ရပ်တွေကို အရှိကိုအရှိအတိုင်း မြင်ခဲ့သူပေါ့။ ကျွန်မလို လူကိုမှ တိုက်အိုကြီးပါ။ အလကားပြိုတော့မှာ။ ဖြိုပြီး ၁၀ထပ်တိုက်ဆောက်ဖို့ ကန်ထရိုက်ပေးလိုက်တာ ကောင်းပါတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်တာ သမိုင်းသက်သေ တယောက်ကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်လိုက် တာပဲ။
ကျွန်မလေ မှတ်မိသေးတယ်။ ၂၄၈ဆိုတဲ့တိုက်မှာ နဂါးနီတိုက်ဆိုပြီး စာအုပ်တွေ ရိုက်တော့ အဲဒီကထွက်တဲ့ ၂၄၈ လွစ္စလမ်းဆိုပြီး ပထမစာမျက်နှာမှာပါတဲ့ ကျွန်မတို့လိပ်စာကို ကြည့်ကြည့်ပြီး ဂုဏ်ယူလိုက်ရတာ။ အဲဒီစာအုပ်လေးတွေ ကျန်သရွေ့ ဒီနေရာမှာ ကျွန်မတို့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သက်သေကျန်မှာလေ။
အဲဒီ၂၄၈မှာပဲလေ။ နေရှင်နယ်ဆိုတဲ့ တေးသံသွင်းဆိုင်လေးလဲ ဖွင့်ခဲ့ကြ သေးတယ်။ နောက်တော့ ပြောင်းသွားကြတယ်။ နံရံတွေမှာတောင် အနောက်တိုင်းဂီတသင်္ကေတတွေဆွဲလို့။ ပြန်တွေးကြည့်ရင် လွမ်းစရာလေးတွေ။
အဲဒီ၂၄၈မှာပဲ။ ခဲဖျက်စက်တွေ၊ ဓာတ်မီးစက်တွေပိုင်တဲ့ သူဌေးကြီးတယောက် နေသွားသေးတယ်။ အဲဒီသူဌေးရဲ့ စက်တွေလဲ မဆလပြည်သူပိုင်သိမ်းတဲ့ထဲ ပါသွားတာ။ ဒါတွေဟာ ပြည်သူ့သမိုင်းတွေ မဟုတ်လား။ အဲဒါတွေကို ကျွန်မမျက်စိနဲ့ တပ်အပ်မြင်ပြီး တိုက်ခန်းသူတိုက်ခန်းသားတွေနဲ့ အတူတူခံစားခဲ့ရတာပါ။
၂၅၀အပေါ်ထပ်က ကုလားတွေဆို ၁၉၆၄မှာ ပါကစ္စတန်က အမျိုးတွေဆီ ပြန်ကုန်တာ။ အောက်ထပ်က ဘိလပ်ရည်စက်ကတော့ ဒီဘက်ခေတ်တွေထိ ကြိုးစားသေးတယ်။ အမေကြီးနဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာ သန်းဝင်းဆိုတဲ့ မိသားစုပိုင် ဘိလပ်ရည်စက်ကလေးကို ပက်စီတို့နဲ့ အပြိုင်တိုက်ကြသေးတယ်။ လွယ်ဟိန်းလဲပေါ်လာရော။ သူတို့ရဲ့ စက်ကလေးလဲ ရပ်ရော။ နေ့လယ်ဆို ဖန်တီခွက်တွေ ထုတဲ့အသံလေးလဲ မကြားရတော့ဘူး။
ဟိုဘက်အုပ်စုကလဲ ခေသူမဟုတ်နော်။ အိုးဝေညိုမြတို့လေ အိုးဝေတိုက်မှာ စုရုံးစုရုံးနဲ့ ရဲရဲတောက်စာတွေရေးကြ ကဗျာတွေ စပ်ကြတုန်းကဆိုရင်လေ အဲဒီတိုက်က ကျွန်မသူငယ်ချင်းက အဲဒီနာမည်ကြီးတွေကို ကျွန်မတို့ကို ခေါ်ခေါ်ပြရတာ အမော။ တတိုင်းပြည်လုံးသိတဲ့လူတွေ သူ့ မျက်စိအောက်မှာ ဆိုတော့ သူလဲဂုဏ်ယူရှာမပေါ့။
ဒီသမိုင်းတွေကို အခုမြို့တော်သူမြိ့တော်သားတွေကို ဘယ်သူပြောမလဲ။ သမိုင်းမသိတဲ့ ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေ၊ အတိတ်နဲ့လက်ရှိ မဆက်စပ်တတ်တဲ့ လူတွေ၊ အရင်တုန်းက သင်ခန်းစာတွေ ယူပြီး ပိုကောင်းတဲ့ အနာဂတ်ကို မရေးနိုင်တဲ့ လူတွေ၊ ဆရာကြီး ဒေါက်တာသန်းထွန်းစကားနဲ့ပြောရင် အ ကုန်တဲ့ လူတွေ ဖြစ်သွားမှာ ကျွန်မတော့ စိုးရိမ်တယ်။ သမိုင်းမရှိတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကြီးလဲ နှလုံးသားမရှိတဲ့ ရင်ဗလာနဲ့လူလိုဖြစ်နေပါပြီရော။
ကျွန်မလို ဘ၀တူတွေ တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေနေတာ မြင်တော့ ကျွန်မရင်ထဲမှာ သိမ်းထားတာတွေကို နားထောင်တဲ့ လူတွေရှိရင် ပြောပြချင်တယ်။ ကျွန်မတို့ မရှိတော့ပေမယ့် ကျွန်မတို့ရဲ့သမိုင်းက တစုံတယောက်ရဲ့နားထဲကနေ ရင်ထဲကို ရောက်သွားပြီး အဲဒီတစုံတယောက်ကလဲ နောက်လူတွေကို ပြောပြခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်မလေ ကျွန်မ အကြောင်း ပြောပြရကျိုးနပ်တာပေါ့။
« A curvy man
A Window into the past »
4 thoughts on “No good thing ever dies”
Posted by ရသာစုံ | 17/04/2009, 09:40
C box လည်းမတ္ဂေ့ပါလား
Posted by လင်းကြယ်ဖြူ | 18/04/2009, 22:11
ညီမရေ- ခရီးတူနေပါပေါ့လား။ သမိုင်းတန်ဖိုး တွေ မထိန်းသိမ်းတတ်တာ..မထိန်းသိမ်းချင်တာ.. ၀မ်းနည်းစရာပါ။
Posted by K | 22/05/2009, 12:02
ကျမ K ရဲ့ Blog ကနေ လာလည်တာ.
ကျမ က လမ်း 40 အ လယ် 173 မှာ နေ တာ ပါ .
ယခု တော့ Londn မှာနေ ပါတယ်။
ကျမ အိမ်နား သူတယောက်တွေ့ လို့ အရမ်း ၀မ်းသာပါတယ်။
ကျမ က 88 မှာ ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသူပါ.
အမတို့ ရဲ့ တိုက်ဝါကြီးကိုမြင်တော့ အိမ်ကိုလွမ်းသွားတယ်။
Posted by yuu wa thone | 25/06/2009, 10:03